Iindaba-ziqhutywa luphuhliso lweshishini leemoto, imakethi yeTurbocharger iyaqhubeka nokwandisa
Iqhutywa kukuPhuhliswa kweShishini lezeMoto, iMarike yaseTurbocharger iyaqhubeka nokwandisa
I-turbocharger isebenzisa ubushushu obuphezulu obukhutshwe kwisilinda emva kokutsha ukuqhuba i-turbine cylinder impeller ukujikeleza, kwaye isiguquli kwelinye icala siqhutywa kukuthwala iqokobhe eliphakathi ukujikeleza i-impeller kwelinye icala lesiguquli, ukuzisa umoya omtsha kwisilinda, ngaloo ndlela kufezekiswa isiphumo sokuphucula ukusebenza kobushushu besixhobo se-injini. Okwangoku, i-turbocharging inokunyusa ukusebenza kwe-injini nge-15% -40%, kodwa ngokuqhubeka kwetekhnoloji ye-turbocharger, i-turbocharger inokunceda i-injini ukuba inyuse ukusebenza kwe-thermal ngaphezulu kwe-45%.
Amacandelo asezantsi anyusa i-turbocharger ligobolondo le-turbine kunye neqokobhe eliphakathi. Igobolondo eliphakathi lihlala malunga ne-10% yexabiso lilonke le-turbocharger, kwaye iqokobhe le-turbine lihlala malunga ne-30% yexabiso elipheleleyo le-turbocharger. Igobolondo eliphakathi yi-turbocharger edibanisa iqokobhe le-turbine kunye neqokobhe le-compressor. Kuba iqokobhe le-turbine kufuneka lidityaniswe kumbhobho wokukhupha imoto, iimfuno zezinto ziphezulu kakhulu, kwaye umqobo wobuchwephesha kule ndima uphezulu kakhulu. Ukuthetha ngokubanzi, iigobolondo zenjini kunye neqokobhe eliphakathi ngamashishini afuna ubuchwepheshe.
Ngokwe "China Turbocharger Industry Market Supply and Demand Status Quo and Development Trend Forecast Report 2021-2025" ekhutshwe liZiko elitsha loPhando lweSijie, imfuno yentengiso yee-turbocharger ikakhulu ivela kwiimoto. Kwiminyaka yakutshanje, imveliso yemoto yase China kunye nentengiso zikhule ngokuzinzileyo. Kuqikelelwa ukuba ngo-2025, inani leemoto ezintsha e-China liza kufikelela kwizigidi ezingama-30, kwaye izinga lokungena kweemarike ze-turbocharger linokufikelela malunga ne-89%. Kwixesha elizayo, ngokukhula kwemveliso kunye nokufunwa kwezithuthi zombane ezixubileyo kunye neplagi ye-hybrid yezithuthi zombane, imfuno yeeturbocharger iya kukhula ngamandla. Kubalwa ngokwenani leemoto ezintsha kunye nenqanaba lokungena kweeturbocharger, ubungakanani bemakethi yeqokobhe lelizwe lam kunye neebhotile eziphakathi ziya kufikelela kwizigidi ezingama-27 ngonyaka ka-2025.
Ixesha lokutshintsha kweqokobhe le-turbine kunye neqokobhe eliphakathi malunga neminyaka emi-6. Ngobuchwephesha betekhnoloji yeinjini, ukuphuculwa kokusebenza, kunye nemveliso entsha kubenzi beemoto, ibango lokutshintsha kweqokobhe leinjini kunye neqokobhe eliphakathi nalo liyanda. Iigobolondo ze-Turbine kunye namaqokobhe aphakathi ngamalungu e-auto. Inkqubo yovavanyo ukusuka kwimveliso ukuya kwisicelo ihlala ithatha malunga neminyaka emi-3, ethatha ixesha elide kwaye ibangele iindleko eziphezulu. Ke ngoko, iimoto kunye nezixhobo ezipheleleyo kulula ukuziphuhlisa kwaye zinamandla okwenza itekhnoloji yokuvelisa. Amashishini agcina intsebenziswano yexesha elide, ke izithintelo ekungeneni kule ndawo ziphezulu kakhulu.
Ngokuya kukhuphiswano lweemarike, abavelisi belizwe lam be-turbocharger ikakhulu bagxile kwiYangtze River Delta. Okwangoku, imakethi ye-turbocharger yehlabathi igxile kakhulu, ikakhulu ihlala iinkampani ezine ezinkulu zeMitsubishi Heavy Industries, Garrett, BorgWarner, kunye ne-IHI. Iigobolondo zeTurbine kunye neenkampani eziphakathi ezivelisa iqokobhe ikakhulu zibandakanya iKehua Holdings, iJiangyin Machinery, iLihu Co., Ltd. nezinye iinkampani.
Abahlalutyi beshishini leXinsijie bathi ii-turbocharger ziyinxalenye ebalulekileyo yeemoto. Ngokukhula okuqhubekayo kwemveliso yemoto kunye nemfuno, isikali sentengiso seeturbocharger siyaqhubeka nokwanda, kwaye ishishini linethemba elingcono lophuhliso. Ngokubhekisele kwimveliso, imakethi ye-turbocharger ineqondo eliphezulu lokugxininisa kwaye iphethini ekhokelayo ibalulekileyo, ngelixa uxinzelelo lwentengiso lwamalungu alo anyukayo, iigobolondo zenjini kunye neqokobhe eliphakathi liphantsi kakhulu, kwaye kukho amathuba ophuhliso amakhulu.
Ixesha Post: 20-04-21
Ibhlokhi B, iHudai Industrial Park, No. 8 Lianhe Road, Wuxi, Jiangsu, China